Abangane - Ukupheka Ukupheka | Ukupheka izindlela zokupheka (Ikhasi 2)
Ikhekhe leMicrowave Sacher
Sacher ikhekhe ku-microwave, ikhekhe elimnandi, elilula futhi elisheshayo ukulungisa. Akunasidingo sokuvula ihhavini.
Ama-meatballs ka-Garlic, iresiphi elula yokwenza, isidlo esisithanda kakhulu futhi esingahamba naso nelayisi elimhlophe, amazambane ...
Ama-scallops abhakiwe, isidlo esisheshayo nesilula ukusilungisa. Sizithola unyaka wonke futhi zilungele ukuthola isibhedlela.
Ikhekhe elibandayo le-tuna, elinothile futhi elilula ukulungiselela. Ilungele ihlobo njengesidlo sakusihlwa noma ukuqala, kubukeka kukuhle kakhulu futhi kuphelele kakhulu.
Ama-paninis okuzenzela nge-tenderloin, ubhekeni noshizi isidlo esiphelele ukulungiselela isidlo sasebusuku esisheshayo futhi esingahlelekile. Kulula futhi kuyashesha ukukwenza.
I-coconut flan nobisi olujiyile, i-dessert enhle kakhulu. Kulula ukulungiselela futhi nokunambitheka okuningi. Ilungele iphathi noma usuku lokuzalwa.
Irayisi elimnyama nge-cuttlefish, isidlo esilula futhi esisheshayo sokwenza, isidlo esiphelele wonke umuntu azothanda. Igcwele ukunambitheka futhi icebe kakhulu.
I-squid ngoyinki wayo, isidlo sendabuko sokudla kwaseBasque, okutholakala emabhaweni njengama-tapas, wokuqalisa noma ipuleti.
ICalamares al ajillo, isidlo esimnandi, esilula futhi esisheshayo. Ukuhambisana namazambane aphekiwe, kuyisidlo esiyingqayizivele.
Izimbaza ezinama-vinaigrette, isidlo esinothile futhi esheshayo ukwenza, zilula kakhulu futhi zinhle kakhulu ngemifino eqoshiwe.
I-omelette ye-leek ne-anyanisi
Ama-omelette ama-leek no-anyanisi, acebile, anamanzi futhi kulula ukwenza. I-omelette yemifino ekahle yokulungiselela ukudla, isidlo sakusihlwa ...
Isaladi le-piquillo pepper ne-tuna
Isaladi le-piquillo pepper ne-tuna, isidlo esipholile sasehlobo, esilungele isidlo sakusihlwa noma ukuqala. Isitsha esiphelele impela.
I-pasta enesipinashi noshizi wesosi, isidlo ongasithanda kakhulu noma sinesipinashi, usoso uyintokozo ezonikeza ukunambitheka okuningi.
Le salifulawa kanye nesaladi lesaladi nge-apula kuhle njengokugcwalisa isemishi, kepha futhi njengokuhambisana nenhlanzi.
Ayikho i-chocolate flan engabhakwa, i-dessert yokuqeda ukudla, i-chocolate flan ezothandwa yiwo wonke umuntu. Kuhle kakhulu.
AmaChorizo ​​ewayinini elimhlophe, isidlo esimnandi ukulungiselela isidlo noma isiqalo. Lihle kakhulu futhi asikwazi ukuswela isinkwa.
Ubhontshisi obuluhlaza ngo-anyanisi nohamu, isidlo esilula nesicebile. Isitsha esisheshayo sokulungiselela okuhle njengokuqala.
Lezi ziqhumane ze-microwaved carrot zilula futhi ziyaqabula, zilungele ukuqala ukuqala ukulwa nezinsuku ezishisa kakhulu.
Ama-augergines agxishwe i-tuna
Ama-aergergine agcwaliswe nge-tuna ebhakwe, isidlo esinothile nesilula ukulungiselela. Kuhle ukulungiselela ehlobo. Umndeni wonke uzoyithanda.
Ama-napolitani ama-Mini chocolate, acebile futhi alula ukwenziwa, alungele ukulungiselela uphudingi oshokoledi osheshayo ohambisana nekhofi.
Amazambane noshizi nebhekeni, isidlo esingasetshenziswa njengesiqalo, uhlangothi noma isidlo sakusihlwa esingahlelekile. Isitsha esizothanda wonke umuntu.
Izimbambo zikasosi kabhiya, isidlo esicekile esilungele ukuqala noma isidlo sakusihlwa. Isitsha esilula ukulungiselela.
Ispaghetti esinezimfanzi zikagalikhi, isidlo esinothile nesilula, isidlo esihle kakhulu sokugubha nomndeni noma nabangane.
Izinkukhu zezinkukhu ezine-curry isidlo esikhulu samaphiko, esinokunambitheka okuningi. Ilungele isidlo sakusihlwa esingahlelekile, njengesidakamizwa noma njengesitsha esikhulu.
I-Ham kanye noshizi omelette, i-omelette ecebile futhi enhle kakhulu enamanzi amaningi. Ama-tortilla yindlela yokupheka kakhulu ...
Loin rolls egcwele ushizi
Loin rolls egcwele ushizi, ocebile namanzi. Njengabaqalayo bayinto ejabulisayo futhi ehambisana namazambane yisidlo esihle.
Ukhilimu we-Microwave khekhe, ocebile futhi olula ukuwulungisa. Ukhilimu ofanele ukulungiselela ama-dessert acebile nalula.
Amasoseji newayini elimhlophe
Amasoseji ewayini elimhlophe, isidlo esilula, esilungele isidlo sakusihlwa noma njengesiqalo, kuhambisane namazambane noma imifino.
Amadombolo agcwele imifino
Amadombolo agcwele imifino, acebile futhi kulula ukuwalungisa. Kuhle ukuhambisana nanoma yisiphi isidlo, njengesiqalo noma isidlo sakusihlwa.
ISanfaina, ungcwecwe wemifino ehlukahlukene oyisitshulu ekahle ukuhambisana nenyama, inhlanzi nezitsha zamaqanda. Isitsha esinothile kakhulu semifino.
I-omelette yemifino, isidlo sokulungiselela isidlo sakusihlwa, njenge-skewer noma ukuhambisana nezinye izitsha. I-omelette yemifino ecebile.
Ilayisi nge-cuttlefish nama-prawn, isidlo esilula kodwa esihle kakhulu selayisi. Ilungele ukulungiselela wonke umndeni.
Upelepele wePiquillo nesaladi le-tuna, isaladi ehlukile, enokunambitheka okuningi futhi kulula ukuyilungisa. Okufanelekile njengokuqala.
Ama-croquette esipinashi noshizi, alula ukuwalungisa futhi muhle kakhulu. Ilungele ukudla imifino, nayo ingenziwa ukuthi isetshenziswe.
I-cod enopelepele notamatisi othosiwe, isitsha senhlanzi esigcwele ukunambitheka. Ucebile kakhulu ngososi kopelepele othosiwe notamatisi.
Ama-Lent fritters ane-anise, uswidi ocebile nolula kulezi zinsuku ze-Easter. Amanye ama-fritters okuhambisana nekhofi.
I-Monkfish isemanzini, iresiphi elula nenambithekayo yezinhlanzi, ekahle ukuyidla nesaladi noma njengesiqalo.
Ama-lentile anemifino namazambane
Ama-lentile anemifino namazambane, isidlo esiphelele nesilula ukulungiselela. Ilungele njengesidlo esikhulu somndeni wonke.
Amazambane anegalikhi kanye ne-parsley vinaigrette
Amazambane anegalikhi kanye ne-parsley vinaigrette, isidlo esinothile nesilula ukulungiselela. Isitsha esifanelekile sokudla okulula noma ukuphelezela isidlo.
I-squid ku-anyanisi sauce
I-squid ku-anyanisi sauce, isidlo esilula futhi esisheshayo sokwenza. Singakulungiselela kusengaphambili kusuka osukwini olulodwa kuya kolandelayo.
I-Cuttlefish kusoso oshisayo
I-Cuttlefish kusoso oshisayo, isidlo esimnandi, nesosi yokufaka isinkwa, esilungiswa ngesikhathi esifushane. Indishi elula yokwenza.
Izinkukhu ezinama-chorizo ​​namazambane
Chickpeas nge chorizo ​​namazambane, isipuni isidlo esimnandi, ekahle kuwo wonke umndeni. Isitsha esiphelele impela.
Ama-artichokes ane-ham, isidlo esinothile nesilula ukwenza. Okufanelekile njengesidambisi, ukuqala noma ukuphelezela isidlo. Banobumnene kakhulu.
I-cod enokholifulawa, isidlo esinothile nesilula, isidlo esilula nesiphelele esifanele ukudla noma isidlo sasemini kuwo wonke umndeni.
Amazambane kanye namakhowe unogwaja casserole
I-Rabbit Potato ne-Mushroom Casserole, isidlo esilula ukulungiselela, esilungele isidlo. Ipuleti eliphelele, elibiza njengepuleti elilodwa.
I-zucchini ne-apula ukhilimu
Ukhilimu we-Zucchini no-apula, ukhilimu omnandi futhi obushelelezi, owangempela futhi ohlukile ukuzilungiselela njengesiqalo ekudleni.
Inkabi yenkomo namazambane
Isitshulu senkomo namazambane, isipuni sesipuni esimnandi, esicebile futhi esilula ukusilungisa. Isitsha esifanele umndeni wonke.
Amazambane acubuziwe ane-rosemary nelamula
Ngabe ufuna isitsha eseceleni senyama yakho, imifino nenhlanzi yokudla? Zama le Potato eliCwecwe i-Lemon Mashed elenziwe namuhla.
Amazambane abhakwe nge-béchamel
Amazambane abhakwe nge-béchamel, isidlo esilula futhi esiphelele, esilungele ukuhambisana nezitsha zenyama noma izinhlanzi noma njengesiqalo.
Izinkukhu zezinkukhu ezine-curry ebhakwe.
Amaphiko enkukhu ane-curry ebhakwe, isidlo esimnandi esinokunambitheka okuningi, i-marinade ekulungele ukudla nabangane.
I-Brokholi nesobho semifino
Isobho le-Broccoli nesemifino isidlo esilula, esilungele isidlo sakusihlwa noma ukudla okwehlisa isisindo, kulula futhi sihle kakhulu.
I-Broccoli ene-bechamel ebhakwe
I-Broccoli ene-bechamel kuhhavini, isidlo semifino esicebile nesinomsoco, ekahle ukwethula ezinganeni ezijwayele ukuyithanda kakhulu.
Ama-croquettes enziwe okuzenzela
Ama-croquette enziwe ngasendlini, amnandi futhi kulula ukuwalungisa. Ilungele ukuhamba nesidlo noma njengesidambisi somzimba.
Ama-Endive agxishwe ushizi wembuzi ne-avocado
Ngabe ulahlekelwe yisiqalo sokuqedela itafula lakho lamaKhosi? Lawa ma-endive agcwele ushizi wembuzi ne-avocado angakwazi ...
Hake usoso ngama-eels
Faka i-sauce ngama-eels, isidlo esilungele umgubho, silula futhi kulula ukusenza. Ipuleti elihle lamaphathi kaKhisimusi.
Ukotapeya, ushizi nesaladi yesalmon
Ukwatapheya, ushizi nesalmoni isaladi, ekahle ukuqala ukudla, kulula ukuyilungisa futhi isha kakhulu.
Izimbaza ze-Tiger noma ezifakiwe, ikhava enhle yokulungiselela ngamaholide noma ngemikhosi. Kucebile futhi kulula ukukwenza.
I-Monkfish enama-prawns kusoso
I-Monkfish enama-prawns kusoso, isidlo esilula okufanele silungiswe, okuyinto enhle kulawa maholide ukuzilungiselela nomndeni.
Mousse ushokoledi uphudingi omuhle ukuqeda ukudla okumnandi. I-mousse yoshokoledi ilula futhi iyashesha ukulungiselela.
Coleslaw, isiqalo esilula ukukulungiselela nesisha noma uhlangothi. Iresiphi efanelekile yokuhamba nezitsha zenyama noma zenhlanzi.
Ukhilimu weVichyssoise, ukhilimu othambile futhi olula ofanele lawa maholide nokuqala ukudla ngepuleti elikhanyayo. Isitsha esilula nesicebile.
Amakhukhi agcwele ushokoledi
Amakhukhi agcwele ushokoledi agcwele okucebile, alungele isidlo noma uphudingi ohambisana nekhofi. Abancane bazoyithanda kakhulu.
Ama-croquette amazambane anegalikhi noparsley
Ama-croquette amazambane anegalikhi kanye neparsley, ama-croquette amnandi kamnandi kakhulu wonke umndeni ongawathanda kakhulu. Kulula ukulungiselela.
Ilayisi enamakhowe namasoseji
Ilayisi elinamakhowe namasoseji, isidlo esilula nesicebile. Isitsha esivela kule sizini sokuwa, esilungele isidlo esiphelele kakhulu.
Amakhowe ku-garlic sauce
Amakhowe anososo kagalikhi, isidlo esilula futhi esisheshayo ukwenza, kuhle ukulungiselela isidambisi, isikhalazo noma ukuphelezela isidlo.
I-anyanisi nesitshalo seqanda omelette
I-omelette eno-anyanisi nesitshalo seqanda, i-omelette ecebile namanzi yedina elincane, elungele labo abathanda imifino.
Lawa ma-croquette e-zucchini adliwa wodwa. Kuyisiqalo esihle noma isitsha sokuqedela ukudla kwakho. Zame!
Inyama ebilisiwe noshizi pasta
I-pasta enenyama noshizi kuhhavini, isidlo esilula futhi esisheshayo. Isitsha esiphelele nesicebile, esifanelekile njengesitsha esisodwa somndeni wonke.
Amadombolo agcwele ushizi
Amadombolo agcwele ushizi, acebile futhi kulula ukwenziwa ngokugcwaliswa koshizi izingane ezithanda kakhulu, zinhle kakhulu.
Amabhola enyama agcwele amaqanda, isidlo esimnandi futhi esilula ukulungiselela, okulungele ukudliwa njengesiqalo noma njengesidakamizwa.
San Jacobos nge ham noshizi
I-San Jacobos ene-ham noshizi, isidlo esilula kakhulu sokwenza ekhaya. Iresiphi wonke umuntu angayithanda ngokugcwaliswa koshizi ocibilikile.
Ama-toast kakhilimu we-hazelnut, ubhanana nesinamoni
Lawa ma-toast ka-hazelnut, ubhanana nesinamoni ayindlela enhle yokudla kwasekuseni ukuqala usuku ngamandla.
IMacaroni ene-zucchini noshizi, isidlo esiphundu se-pasta sokulungiselela wonke umndeni, isidlo esiphelele nesilula ukusilungisa.
Ukhilimu wamazambane amnandi
Ukhilimu wamazambane amnandi, ukhilimu olula futhi olula, olungele ukuqala noma isidlo sakusihlwa. Ukhilimu wasekwindla ozomangaza wonke umuntu.
Amadombolo emifino asikiwe
Amadombolo emifino asikiwe, acebile futhi agcwele ukunambitheka okuhambisana nanoma yisiphi isidlo noma isidlo. Ilungele abancane.
I-spaghetti se-zucchini nenkukhu, isidlo esinempilo ngokuphelele. Isitsha sokumangaza umndeni noma abangane ngesikhathi sokudla.
Isaladi le-piquillo pepper, isaladi ekahle njengesiqalo noma njengesitsha esisodwa. Imnandi futhi kulula ukuyilungiselela.
Le toast yoshizi wezimbuzi notamatisi iyindlela enhle njengesikhalazo noma ukuqala ngesidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa nabangani.
Ukholifulawa oshaywayo, indlela enhle kakhulu yokudla ukholifulawa, ilungele izingane ezincane okunzima ukuzidla.
Izimbaza Esosweni Esishisayo
Izimbaza ezinososi obabayo, isidlo esimnandi nesosi ecebe kakhulu futhi elula esingazilungiselela kusengaphambili.
I-cheesecake ne-caramel sauce
Ikhekhe le-Cheese ne-caramel sauce, i-atarta ecebile kakhulu esingayilungiselela ngemuva kosuku lokuzalwa noma lokudla kwephathi.
Izimfanzi zika-Garlic, isidlo esicebile nesilula, esilungele ukuqala noma i-tapa esingazilungisa ngesikhathi esifushane.
I-cannelloni yasehlobo, isidlo esipholile esizolungiswa njengesiqalo noma isibulala-nsipho. Isitsha esilula esingasilungiselela kusengaphambili.
I-squid ku-anyanisi sauce, isidlo esilula futhi esinothile esingasilungiselela isibulala-zilonda noma njengesiqalo.
Utamatisi nesaladi le-mozarella
Isaladi likatamatisi ne-mozarella isidlo sangokwesiko sase-Italiya, lilungele ukuqala futhi ihlobo licebile futhi lisha, ligcwele ukunambitheka.
I-sandwich enempilo, ecebile futhi elula ukuyilungisa. Ilungele ibhulakufesi, idina noma ngasiphi isikhathi, manje ngalokhu kushisa bazizwa bethanda.
Ukotapeya, utamatisi noshizi ophekiwe
Ngabe uthanda ukushintshashintsha ekudleni kwakho kwasekuseni? Lawa ma-toast eshizi, utamatisi noshizi ophehliwe kuyindlela enhle yokuqala usuku lwakho.
Inkukhu ku-anyanisi sauce
Inkukhu ku-anyanisi sauce, isidlo esilula ukulungiselela, nokunambitheka okuningi. Isitsha senkukhu esizothanda wonke umndeni.
Ikhekhe le-bhisikidi ne-chocolate flan
Ikhekhe le-biscuit ne-chocolate flan, i-dessert elula ngaphandle kwehhavini, yinhle kakhulu. Ilungele usuku lokuzalwa noma iphathi yezingane.
Isaladi lafaka izintaba-mlilo nge-salmon
Ama-Volovanes agcwele isaladi le-salmon, isidlo esisheshayo futhi esilula ukulungiselela. Ukuqala okuphelele ukuqala ukudla.
Ukugoqwa kwesalmon okushunqisiwe
Ukugoqwa kwesalmon okubunjiwe, ukuqala okunothile nokulula. Kupholile kakhulu ukuqala ukudla noma isidlo sakusihlwa somndeni wonke.
IGazpacho nesinkwa, isidlo esimnandi esilungele ihlobo, isiqalo esisha sha, esigcwele amavithamini namaminerali. Iresiphi ekahle.
Isitshalo seqanda esinezinto Gratin
Ama-aergergine agcwele noma i-gratin, isidlo esiphelele kakhulu esingalungiswa njengesitsha esisodwa. Ilungele ukuthatha ukusebenza.
Isaladi elixutshiwe ne-pink sauce
Isaladi elixutshiwe ne-pink sauce, ukuqala okusha kwezinsuku zasehlobo. Njengecala noma ukuqala kuhle kakhulu.
Irayisi elinsundu ngenkukhu namakhowe
Irayisi elinsundu elinenkukhu namakhowe, isidlo esilula futhi esilula ukusilungisa.Lesi sidlo selayisi silula futhi ...
Ikhekhe le-Puff pastry elinemifino ebhakwe
Ikhekhe le-Puff khekhe elinemifino ebhakiwe, okulungele ukulungiselela isidlo sasebusuku ngayo yonke imifino esinayo efrijini. Ecebile futhi elula.
Isaladi ngokhula lwasolwandle lwakame
Isaladi ngotshani lwasolwandle lwaseWakame, isaladi elula futhi esheshayo ukuyilungisa. Isitsha esinempilo esinamavithamini namaminerali amaningi.
Puff khekhe ikhekhe nge ushokoledi ukhilimu kanye alimondi
I-Coca de hojadre ngoshokoledi no-almond ukhilimu, i-coca elula futhi esheshayo yokulungiselela uphudingi noma imikhosi yaseSan Juan.
I-Garlic cockles, i-mollusk ecebile futhi elula ukuyilungisa. Ilungele ukulungiselela ama-Starters, i-snack noma i-tapas noma ukuhambisa ezinye izitsha.
Amaqanda aqhephukile namazambane neham
Amaqanda aqhekeziwe namazambane neham, isidlo esihle wonke umuntu azothanda. Ideal njengoba ukuziqalela noma njengoba isidlo. Isitsha esilula.
I-basil noma i-pesto sauce
I-basil noma i-pesto sauce, isosi yendabuko yokudla kwase-Italy ekahle yokuhamba ne-pasta, imifino, inhlanzi, inyama, amasaladi ...
Amadombolo afakwe i-flan
Amadombolo afakwe i-flan, i-dessert emnandi noma isidlo. Amanye amadombolo amnandi ane-flan angathandwa yiwo wonke umuntu, kulula kakhulu ukuwalungisa.
I-salmon ebhaka nemifino
I-salmon enemifino ebhakiwe, isidlo esisheshayo nesilula ukusilungisa, esingasilungisa njengesiqalo noma isidlo esisodwa. Isitsha esiphelele impela.
Iphepha lesipinashi elinosawoti
Ikhekhe elinosawoti wesipinashi, isidlo esilula ukulungiselela, sihle kakhulu, silungele ukulungiselela isidlo sakusihlwa esisheshayo futhi esilula. Kuhle kakhulu kuwo wonke umndeni.
Amasoseji ku-anyanisi sauce
Amasoseji ku-anyanisi isoso ocebile, olula futhi osheshayo ukulungiselela. Okufanelekile njengokuqala noma ukuthatha ukusebenza.
Izimbambo zengulube ku-sauce
Izimbambo zengulube ku-sauce, isidlo esilula futhi esisheshayo ukulungiselela, esilungele isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Kungabuye kulungiselelwe kusengaphambili.
Puff khekhe eluka nge ushokoledi nama-walnuts
Puff khekhe eluka ngoshokoledi namantongomane, i-dessert elula futhi esheshayo ukuyilungisa, ekahle ukuhambisana nekhofi noma isidlo.
Ama-pancake ka-Ham noshizi
Ama-pancake ka-Ham noshizi, ama-pancake anokugcwaliswa okunothile, alungele ukulungiselela isidlo sakusihlwa esisheshayo nesilula, sihambisana ne-pico de gallo.
Ukhilimu we-Asparagus oluhlaza
Ukhilimu we-asparagus oluhlaza, olungele ukulungiselela okhilimu abashisayo noma ababandayo noma isobho. Indishi enempilo futhi engabizi, esheshayo ukulungiselela.
I-Rabbit casserole enososo
I-Rabbit casserole ngo-sauce, isidlo esidliwayo sikanogwaja ososi, ocebile futhi olula obiza njengesitsha esihlukile esihambisana nemifino noma amazambane.
I-Tenderloin enemifino ethosiwe namakhowe
Loin ngemifino ethosiwe namakhowe isidlo esiphelele kakhulu somndeni wonke. Isitsha esingasebenzisa imifino esiyithanda kakhulu.
Ispaghetti esine-tuna yisitsha se-pasta esizothanda wonke umndeni, isidlo esilula futhi esisheshayo sokulungiselela okuphelele okufanele usizame.
Amadombolo kaHamu noshizi
Amadombolo kaHamu noshizi, amnandi futhi kulula ukuwalungisa la amadombolo wonke umuntu azowathanda. Njengokuqala noma ukudla okulula, zilungile.
Amazambane ama-microwave nopelepele
Amazambane nopelepele ku-microwave isidlo esilula, esisheshayo futhi esishibhile. Isitsha esingasipheka nganoma yisiphi isikhathi.
Isinkwa saseFrance esine-orange
I-Torrijas ene-orange, i-dessert yendabuko yalezi zinsuku ze-Easter. Ngokuthinta i-orange kuhle kakhulu.
ICod au gratin ene-aioli, iresiphi enhle kakhulu ongayilungisa ngalezi zinsuku zePhasika. Isitsha se-cod esihle kakhulu futhi esilula.
Isobho semifino elenziwe ekhaya
Isobho lemifino elenziwe ekhaya, isidlo esilula nesinempilo. Isitsha esifudumele ukujabulela esidlweni esincane, siyasutha impela futhi sihle kakhulu.
I-asparagus omelette, yedina esheshayo nelula. I-omelette elula futhi enempilo kakhulu. Njengesidlo sakusihlwa noma i-starter ilungele wonke umndeni.
Inkukhu ekhishwe ngamakhowe
Inkukhu iyisitshulu enamakhowe, isidlo esicebile, esilula futhi esiphelele, esilungele wonke umndeni. Isitsha esingasilungiselela kusengaphambili.
Ama-donuts anewolintshi, amnandi futhi alula ukuwalungisa, anephunga elimnandi kakhulu lewolintshi, elifanele ukuhamba nekhofi.
I-Puff pastry egcwele i-tuna neqanda
I-Puff pastry egcwele i-tuna neqanda, iresiphi elula enhle kakhulu, elungele ukulungiselela isidlo sakusihlwa somndeni wonke.
IMacaroni notamatisi nebhekoni
IMacaroni enotamatisi nebhekoni, isitsha se-pasta esicwebile njengesifundo esiyinhloko. Ucebile futhi ulula ukulungiselela nokuthi wonke umuntu angathanda.
Ukhilimu we-Zucchini namazambane
Ukhilimu we-Zucchini onamazambane isidlo esenziwe ekhaya esinempilo sokufaka imifino. Isitsha esilula nesisheshayo esizolungiswa.
Amazambane Ahlanganiswe Ngezinyama
Amazambane agcwele inyama, isidlo esinothile futhi esiphelele kakhulu esingasilungiselela wonke umndeni. Isitsha esingasipheka ngezithako ezimbalwa.
I-Bimi isuswe ngososi wesoya
I-Bimi isuswe ngososi wesosi, isidlo esinempilo esinezinto eziningi, esilungele ukuhambisana nanoma yisiphi isidlo senyama noma senhlanzi.
Amakhekhe e-Cheese ne-frankfurt
Amakhekhe e-Cheese ne-frankfurter kulula ukulungisa ama-roll, alungele isidlo sakusihlwa noma isidlo noma iphathi yosuku lokuzalwa.
I-omelette yamazambane ne-chorizo
I-omelette yaseSpain ne-chorizo, isidlo sendabuko samazambane esinamakha amaningi anokunambitheka okuningi kune-chorizo. Isitsha esizothanda wonke umuntu.
Inkukhu ebhakiwe ngemifino
Inkukhu ebhakwe enemifino, isidlo esilula futhi esimnandi ukulungiselela wonke umndeni. Inkukhu enokunambitheka okuningi nokuthi uzoyithanda kakhulu.
Ama-croquette amazambane nama-parmesan
Ama-croquette amazambane namaParmesan, alungele ukulungiselela ama-tapas noma njengokuhambisana nanoma iyiphi inyama yokudla noma inhlanzi.
Ama-lentile ane-chorizo ​​namazambane
Ama-lentile ane-chorizo ​​namazambane, isidlo esifanele sezinsuku ezibandayo. Indishi yesipuni ehlanzekile yomndeni wonke, iphelele impela
I-Swiss chard enamazambane e-paprika
I-chard yaseSwitzerland enamazambane e-paprika, isidlo esilula, esilula futhi esiphelele impela, kufanele nje sihambisane neqanda elibilisiwe futhi sidla isidlo sakusihlwa esihle.
I-Broccoli nokhilimu wesipinashi
I-Broccoli nokhilimu wesipinashi isidlo esiduduzayo kakhulu ukudlulisa amakhaza. Zikulungele isidlo sakusihlwa esilula noma njengesiqalo.
IBurritos enenkukhu nopelepele
IBurritos enenkukhu nopelepele, ilungele ukulungisa isidlo sakusihlwa nabangane noma nomndeni. Amanye ama-burritos esingawalungisa ngesikhathi esifushane.
Izimbambo zezinyosi zengulube, isidlo esigcwele ukunambitheka nokuqhathanisa, sicebile futhi silula. Ilungele ukulungiselela wonke umndeni.
Ama-croquette aphekiwe azenzele
Ama-croquette aphekiwe azenzele, isibiliboco sama-croquette muhle kakhulu. Inketho enhle yokuhambisana nanoma yisiphi isidlo noma njengesiqalo.
Isitshulu sebhontshisi namazambane
Isitshulu sebhontshisi namazambane, isidlo sendabuko esenziwe ekhaya, esilula, esilula ukupheka futhi eshibhile. Ipuleti lezinhlamvu zomndeni wonke.
Amadombolo agcwele ushokoledi
Amadombolo agcwele ushokoledi, i-dessert elula, esheshayo futhi emnandi. Ilungele i-dessert, isidlo noma isiphi isikhathi.
Lawa makhowe nama-croquette ama-leek anokunambitheka okuningi futhi alungele ukuqala lapho unezivakashi. Ngabe unesibindi sokuzilungiselela?
I-artichoke negalikhi omelette
I-artichoke negalikhi omelette, elungele idina esheshayo futhi elula. Manje njengoba isikhathi se-artichoke siqala, kufanele usebenzise ngokunenzuzo ukuzidla.
URavioli onemifino, iresiphi elula nenempilo okufanele ayilungiselele. Okufanelekile njengokuqala, isidlo esizothanda wonke umndeni.
Ukuhlukahluka ngama-garlic prawn
Elvers with garlic prawn, ekahle njenge-tapas, starter, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Kula maholidi yisidlo esijwayelekile, esimnandi futhi esilula ukukulungisa.
I-avocado ne-crab stick cocktail
I-avocado kanye ne-crab stick cocktail, ukuqala okusha nokukhanya, okulungele ukuqala ukudla kule sizini samaholide.
I-canape yengulube yethenda ne-brie ushizi
Kuleli sonto sizoqhubeka nokuphakamisa imibono ngemigubho kaKhisimusi elandelayo. Ithenda yengulube ne-brie canape ngu ...
I-chocolate coulant, i-dessert emnandi ukuyilungiselela ekhaya. Kuhle ngemuva kwekhishi elihle futhi kumangaze izivakashi zethu.
Amazambane acubuziwe gratin
Amazambane acubuziwe i-gratin, iresiphi elula futhi eyenziwe ekhaya. Isitsha esifanele ukusidla njengesiqalo noma ukuhambisana nezinye izitsha.
Inkukhu skewers nelayisi elinsundu
Inkukhu skewers nelayisi elinsundu, isidlo esilula futhi esinempilo. Iresiphi elula ukuyilungisa, enhle kakhulu.
I-Butifarra enamakhowe, iresiphi elula kakhulu futhi esheshayo esingayilungiselela wonke umndeni. Isitsha esinokunambitheka okuningi.
I-anyanisi ne-tuna omelette
I-anyanisi omelette ne-tuna, iresiphi elula futhi esheshayo yokwenza. Okufanayo kusebenza nakithi ngesidlo sakusihlwa esisheshayo ukulungisa isemishi.
Ithanga, amazambane kanye nesanqante puree
Ithanga, amazambane kanye nesanqante puree, kulula ukulungisa isidlo esinempilo futhi esilula. Indishi yesipuni ekahle yokuhambisana nalomkhuhlane.
UPita wahlohlwa ngenyama yenkukhu
UPita ogcwele inyama yenkukhu nesaladi nge-mayonnaise sauce, okulungele ukulungiselela isidlo sakusihlwa esingahlelekile nabangane, isidlo esilula.
Amathanga Enkukhu Ahlanganisiwe
Amathanga enkukhu agcwele ubhekeni noshizi, isidlo esikahle sokulungiselela emcimbini noma emkhosini nomndeni. Zilula futhi zilunge kakhulu.
I-Pancake crust pizza
I-pizza enenhlama ye-pancake, ekahle ekulungiseleleni isidlo esisheshayo nesingakahleleki, zilunge kakhulu futhi ziyashesha ukuzilungisa.
IMacaroni gratin enemifino
IMacaroni gratin enemifino isidlo esilula futhi esilula ukulungiselela. Ipuleti lemifino wonke umuntu angalithanda. Isitsha esinamanzi nesicebile kakhulu.
Amakhowe ahlanganisiwe kusoso
Amakhowe ahlukahlukene kusoso, iresiphi elula ewusizo njenge-tapa, ukuqala noma ukuhambisana nanoma yisiphi isidlo, inyama noma inhlanzi. Zinhle kakhulu.
Amazambane acubuziwe noshizi ozohambisana nawo
Amazambane acubuziwe esiwaphakamisa namuhla amuncu ngokukhethekile futhi ahambisana ngokuphelele nenyama, inhlanzi nemifino.
Ingulube yengulube enokhilimu we-chmpiñones
Ithenda yengulube enokhilimu wamakhowe, iresiphi elula futhi elula ukuyilungisa. Ilungele isidlo sephathi noma isidlo sakusihlwa.
Ikhekhe likaHamu noshizi
Ikhekhe likaHamu noshizi, iresiphi elula wonke umuntu angayithanda. Iresiphi elula elula yedina engahleliwe nabangani.
Isitshulu senkomo ngama-artichokes
Isitshulu senkomo esine-artichokes, isidlo sendabuko sesipuni. Isitsha esiphelele, esisifanele njengesitsha esisodwa. Ilungele wonke umndeni.
Amadombolo kaLeek noshizi
Amadombolo ama-leek noshizi, iresiphi elula esebenza njengesiqalo noma uhlangothi. Futhi ngama-tapas ayintokozo.
I-Bonito enotamatisi owenziwe ekhaya
I-Bonito enotamatisi owenziwe ekhaya, isidlo esilula futhi esimnandi kakhulu. Kuhle ukwethula izinhlanzi eziluhlaza okwesibhakabhaka, ngososo katamatisi kuhle kakhulu.
IMacaroni enenyama nemifino
IMacaroni enenyama nemifino, isidlo esimnandi, esiphelele impela esilungele wonke umndeni. Iresiphi elula futhi ewusizo.
Izinkukhu zamabele ezinamakhambi
Izinkukhu zamabele ezinamakhambi, isitsha senkukhu esilula futhi esiphelele esinokunambitheka okuningi. Iresiphi ekahle yomndeni wonke.
Isitshalo seqanda kanye ne-omelette ye-zucchini
Isitshalo seqanda ne-omelette ye-zucchini, isidlo esilula futhi esilula sokwenza. ipuleti lemifino. ilungele isidlo sakusihlwa noma isibulala-ndawo.
Ikhekhe le-Mascarpone ushizi ngaphandle kwehhavini
Ikhekhe likashizi iMascarpone ngaphandle kwehhavini, ikhekhe elilula ukulungiselela ngaphandle kwehhavini. Uphudingi ofanele ngemuva kokudla okumnandi.
Isipinashi ravioli nge-mushroom sauce
Isipinashi ravioli nge-mushroom sauce isidlo se-pasta esilula, iresiphi ephelele. Njengokuqala noma isidlo esisodwa kufanelekile.
I-anyanisi, i-zucchini namazambane omelette
Zucchini anyanisi namazambane omelette iresiphi elula nephelele yokulungiselela isidlo sakusihlwa, i-tapa noma isidlo sasemini. Ilungele wonke umndeni.
Ingulube enotamatisi, isitshulu senyama esilula futhi esisheshayo ukulungiselela, sihle kakhulu futhi sinososo omnandi ongathanda kakhulu.
Isemishi lemifino nokwatapheya
Isemishi lemifino eline-avokhado, elicebile futhi elilula ngesidlo sakusihlwa noma isitswana lihle futhi nge-avocado libukeka lilihle. Iphilile kakhulu.
Ukhilimu wekhukhamba obandayo
Ukhilimu wekhukhamba obandayo, isiqalo esiqabulayo noma isibabule okufanele usithathe ehlobo. Isitsha esilula, esisheshayo ukulungiselela futhi esinempilo kakhulu.
I-Watermelon ne-banana smoothie
I-Watermelon ne-banana smoothie, isithelo sezithelo esenziwe ngokucebile, ngesidlo sasekuseni noma sasehlobo. Ilungele ukudla izithelo.
Cold isobho utamatisi
Isobho setamatisi elibandayo, ukuqala okusheshayo, okusha futhi okulula ukulungiselela. Ilungele ukwenza njengesiqalo sehlobo.
I-Calamares a la romana, isiqalo esimnandi noma isidlo, singayithola futhi njenge-tapa kumabha amaningi we-tapas. Ucebe kakhulu.
Ikhabe netamatisi gazpacho
I-Watermelon ne-tomato gazpacho, ukuqala okusha ukuqala ukudla. Ikhanya kakhulu futhi icebile, ilungele wonke umndeni.
I-Meringue enobisi lwesinamoni i-granita
I-meringue yobisi enesinamoni, i-dessert entsha necebile. Futhi njengesidlo sokuziqabula futhi sidlulise ukushisa.
Amadombolo e-tuna athosiwe
Izindwangu zohlobo lwe-tuna ezithosiwe ezenziwe ngomuntu, ezilungele isivikeli mzimba noma isiqalisi. Ukugcwaliswa okuzothanda wonke umuntu futhi kuhle kakhulu.
Isaladi yezwe isidlo esisha futhi esilula ukulungiselela ngezinsuku zasehlobo. Ilungele isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa somndeni wonke.
ICold Pastel Salmon
Ikhekhe elibandayo le-salmon, ukuqala okupholile kakhulu ehlobo. Ilungele ukungena noma idina elingakahleleki, kuhle kakhulu.
Ubhontshisi kanye nesaladi lekhodi
Ubhontshisi ne-cod isaladi isitsha esisha esilungele ukuqala noma isidlo sasehlobo. Isitsha esiphelele kakhulu somndeni wonke.
I-Broccoli ene-ham noshizi
I-Broccoli ene-ham noshizi isidlo esilula futhi esisheshayo okufanele silungiselelwe. Isitsha esikahle esinempilo njengesiqalo somndeni wonke.
UGazpacho ngaphandle kwesinkwa
IGazpacho ngaphandle kwesinkwa, isidlo esilula, esinempilo futhi esilula esilungele ukuqala noma isifundo sokuqala. Isitsha esipholile sehlobo.
Ama-aubergines athosiwe noju
Ama-aubergines athosiwe anoju, isidlo esilula esigcwele ukunambitheka, okuhlukile noju olwenza kube isidlo esihlukile nesicebile.
Amazambane athosiwe kanye nesaladi le-Pepper
Isaladi lamazambane nopelepele owosiwe, isidlo esikahle ehlobo, esisha nesiphundu. Kulula kakhulu ukuyilungiselela, ilungele wonke umndeni.
Isobho lotamatisi elijiyile nge-ham ne-tuna
Amasobho abandayo aqabula kakhulu ehlobo. Enye yezintandokazi zami yilesi sobho sotamatisi esijiyile, esine ...
Isanqante nokhilimu omnandi
I-carrot no-ukhilimu we-leek, ukuqala okulula nokulula. Ukhilimu esingawudla ushisa noma ubande. Ilungele wonke umndeni.
Izinyosi ezizenzele zona kanye ne-Pork Curry Burgers
Ama-burger wenkomo nenyama yengulube eyenziwe ekhaya, injabulo ye-haburger. Ilungele idina elingakahleleki, lapho abancane bezokujabulela khona.
Upelepele othosiwe kuhhavini, iresiphi elula, upelepele ukuhambisana okuhle nezinye izitsha ezifana nenyama, inhlanzi, amasaladi ...
I-Strawberry netamatisi gazpacho
I-Strawberry netamatisi gazpacho, isiqalo esisha esigcwele amavithamini. Kuhle ukuchitha izinsuku ezishisayo. Ipuleti elinemifino eminingi.
I-Andalusian gazpacho ingenye yezitsha ezingasoze zashoda etafuleni eningizimu yeSpain e ...
I-Russian steaks curry
Namuhla ngikulethela lezi zinhlobonhlobo zezinkomo zendabuko zaseRussia, isibiliboco esinokuthinta okungajwayelekile okuzojabulisa ngisho ...
Isinqe esibhakwe esigcwele ushizi
Loin egcwele ushizi kuhhavini namazambane, isidlo esilula sokwenza futhi sithandwa kakhulu. Ithenda elimnandi nelicebile eligxishwe ushizi.
Puff khekhe nge ubhekeni noshizi
I-puff pastry ne-bacon noshizi, amanye ama-rolls we-puff pastry, alungele isidlo, noma isidlo sakusihlwa esingahlelekile. Bazothandwa yibo bonke.
Ubhekeni noshizi mini quiches
Lezi quiches ezincane ziyisidlwana esimnandi ongasenzela noma yisiphi isenzakalo. Zithambile futhi zinamanzi kangangokuba ...
Izinkuni zenhlama efakwe izinongo
Lezi zinkuni zenhlama enongwe zi-appetizer ekahle ongayisebenzisa kunoma yisiphi isenzakalo. Zilungiselelwe ngemizuzu embalwa ...
I-Falafel iyi-croquette echotshoziwe ye-chickpea. Ukulungiswa okujwayelekile eMiddle East lapho singafaka khona okuningi ...
I-Ham nama-croquette amaqanda abilisiwe
I-Ham nama-croquette amaqanda aphekwe kanzima, i-appetizer, i-starter noma uhlangothi, kulula ukuyilungisa nokuthi abancane bathanda okuningi.
I-cauliflower hummus ingenye yezintandokazi zethu. Uhlobo olusha lwalesi sidlo samazwe omhlaba esiluthanda kakhulu njengesidlwana.
Ama-peas othosiwe nge-bacon
Uphizi osikiwe ngebhekeni, isidlo esilula futhi esiphelele. Iyashesha ukulungiselela, ilungele ukuqala noma uhlangothi.
Inkukhu ku-sauce ye-carbonara
Inkukhu nge-carbonara sauce, isidlo esilula esilungiswa ngesikhathi esifushane futhi esilungele noma yisiphi isidlo. Isitsha esihle kakhulu.
I-Turkey nge-sauce namazambane
I-Turkey inososo namazambane, isidlo esiphelele esingahambisana nakho konke esikuthanda kakhulu, njengamazambane, imifino noma irayisi eliphekiwe.
Isipinashi nesaladi le-Strawberry
Isaladi lesipinashi nesitrobheli, lapho kufika isimo sezulu esihle amasaladi athakazelisa kakhulu. Zingalungiswa kusuka kwabaningi ...
Ubhontshisi obuluhlaza nge-ham no-anyanisi
Ubhontshisi obuluhlaza nge-ham no-anyanisi isidlo esinothile futhi esinempilo. Kuhle ukuhambisa isidlo noma njengesitsha esisodwa sokudla kwasebusuku.
I-pasta enesipinashi nenkukhu
I-pasta enesipinashi nenkukhu iresiphi elula futhi elula ukuyilungisa, ilungele izingane ukuthi zidle imifino. Isitsha esiphelele impela.
IMozzarella Stuffed Meatballs
IMozzarella yafaka inyama yenyama. Ukudla akudingeki kube yisicefe, kwesinye isikhathi asazi ukuthi yini okufanele siyilungiselele futhi sinokuncane ...
I-Polenta ene-arugula ne-sitrobheli isaladi
I-polenta ethosiwe isebenza njengokuhambisana nalesi sidlo ukuthola isaladi elula neqabulayo ye-arugula nesitrobheli. Ngabe ulinga ukukuzama?
Iklabishi enamazambane e-paprika
Iklabishi enamazambane e-paprika, iresiphi elula nenempilo okufanele uyilungiselele. Isitsha esingabizi kakhulu esenziwe ngezithako ezimbalwa.
Ikhekhe le-Puff khekhe elinemifino noshizi
Puff khekhe ikhekhe nemifino kanye noshizi, iresiphi elula futhi ephelele. Ilungele ukulungiselela isidlo sakusihlwa esingahlelekile somndeni wonke.
I-Pepper Hummus eyosiwe
Siqala impelasonto silungiselela okungaba iresiphi efanelekile yokuqedela isidlo sangokuhlwa: i-hummus ...
Izinhliziyo ze-artichoke ezishaywayo
Izinhliziyo ze-artichoke ezishaywayo, iresiphi yemifino elula necebile. Isitsha esifanele ukuhambisana nanoma yisiphi isidlo noma njengesidambisi somoya.
Iresiphi yeCod fritters, iresiphi elula yama-fritters, ekahle ukuyilungisa ngePhasika noma ngasiphi isidlo.
Ama-artichokes kusoso, iresiphi yemifino kusoso. Kuhle ukuhambisana nanoma yisiphi isidlo noma njengesiqalo. Isitsha esinempilo.
I-Chickpea ne-chilli hummus
I-Hummus iyinhlanganisela enokhilimu enziwe ngotshani, isidlo sendabuko se-Middle East cuisine….
I-Turkey ne-Cheese French Omelette
I-Turkey kanye noshizi i-omelette yesiFulentshi, i-omelette elula futhi esheshayo ukuyilungisa, ilungele idina elikhanyayo noma izingane.
Imifino nenkukhu isobho
Isobho semifino nenkukhu, isidlo esiduduzayo salezi zinsuku ezibandayo, sifudumele kakhulu futhi senziwe ekhaya. Isobho eligcwalisa kakhulu futhi elilula.
Ama-chocolate nezithelo ezomisiwe
Ushokoledi onezithelo ezomisiwe, i-dessert elula futhi esheshayo yokwenza. Alidingi kuhhavini, kufanele silivumele lipholile efrijini futhi lizolunga.
Puff khekhe nge utamatisi
Puff khekhe nge utamatisi, iresiphi elula futhi esheshayo ukulungiselela. Njengesiqalo sesidlo sakusihlwa kuhle kakhulu futhi kuhle kakhulu.
Ama-lentile ane-octopus, isitsha sesipuni esinezingcezu ze-octopus, isitshulu esilula futhi esihlukile ukulungiselela, ngokuqinisekile uzosithanda.
I-pie yenkukhu enosawoti enosawoti
Namuhla ngikulethela leli khekhe elimnandi nelinambitheka elinosawoti wenkukhu, inguqulo yeQuiche de ...
Ama-croquette kaSerano ham noshizi
Ama-croquette kaSerano ham noshizi, ama-croquette amnandi namanzi ukulungiselela i-tapas noma i-starter. Kulula ukulungiselela.
I-lasagna yesipinashi se-Catalan
Isipinashi saseCatalan lasagna isidlo, iresiphi enhle engalungiswa kusengaphambili. Isitsha esicebile nesinempilo.
Isoyi eluhlaza ilungiselela isitsha esicebile sesipuni, kufana nelinye. I-Soy imidumba enempilo futhi elula.
IMacaroni Bolognese isidlo esicebile nesiphelele, esilungele wonke umndeni. Isitsha esiphelele esisifanele njengesitsha esisodwa.
Ubhekeni onosawoti noshizi muffin
Ukulungiselela isidlo sakusihlwa ngokuvamile kungelinye lamakhishi ongawathandi, ngokuvamile, ufika ebusuku ukhathele futhi ...
Inkukhu kanye ne-ananas skewers
Inkukhu ne-ananas skewers, iresiphi elula ukuyilungisa. Ipuleti eligcwele ukunambitheka okuzothandwa ngumndeni wonke. Ilungele ukosa.
Ikhekhe le-Hake ne-prawn
Lekhekhe elimnandi le-hake ne-prawn likulungele ukusebenzela kokubili esimweni esikhethekile, kanye nanoma yisiphi isidlo ...
Ikhodi ebhakwe namazambane
Ikhodi ebhakwe namazambane, isidlo esikhulu se-cod esilula ukusilungisa. Indishi esingayipheka emicimbini.
Imifino yenkukhu eyosiwe
Inkukhu eyosiwe ifaka isitsha esilula nesingabizi kakhulu ukulungiselela noma kunini, ngeholide noma ngesikhumbuzo seminyaka, isidlo esikhulu.
Ukulunywa isitshalo seqanda ne-ricotta
Lokhu kulunywa isitshalo seqanda okumnandi kanye ne-ricotta kuhle kunoma yisiphi isenzakalo. Kuyinto iresiphi elula ukuyilungisa futhi iphelele ...
Namuhla ngikulethela lekhekhe elimnandi futhi elilula lemifino, isidlo esisheshayo sokulungiselela futhi silungele noma yimuphi umcimbi. KUYA…
Isaladi elifakwe ukwatapheya
Ukotapeya ofakwe isaladi, ukuqala okulula nokulula ukuqala isidlo sephathi. Okuhambisana nososi obomvana kuhle kakhulu.
Inhlanzi ne-prawn casserole
I-Fish ne-prawn casserole, isidlo esinothile nesilula, esilungele ukulungiselela lamaholide azayo. Ipuleti eliphelele.
Ukhilimu wethanga onama-prawn
Ukhilimu wethanga onama-prawn ukuqala okuthambile nokukhanya, okulungele ukuqala isidlo sephathi. Isitsha esinempilo.
Amadombolo agcwele imifino elungiselelwe kuhhavini. Isiqalo esicebile nesilula noma isikhalazo sokulungiselela, esilungele isidlo sakusihlwa esingahlelekile.
Ukhilimu we-Zucchini no-leek
Ukhilimu we-Zucchini no-leek ukhilimu olula, obushelelezi futhi olula. Ilungele ukulungiselela isidlo sakusihlwa futhi ijabulele isidlo esishisayo.
I-pizza eyenziwe nge-carbonara eyenziwe ekhaya
I-pizza eyenziwe nge-carbonara eyenziwe ekhaya, i-pizza esiphundu, egcwele ukunambitheka nokumnandi. I-pizza elula yokulungisa enezithako ezimbalwa.
Isitshalo seqanda kanye ne-omelette yama-leek
Isitshalo seqanda kanye ne-leelet omelette, isidlo esilula futhi esinamanzi amaningi. Isitsha esifanelekile esinempilo sedina. Kuyashesha futhi kulula ukulungiselela.
Iresiphi elula yama-empanadilla enyama, isidlo esimnandi esinokuthinta okulula kwaseMexico. Ilungele ukusebenza njengesiqalo noma inkambo eyinhloko
Unogwaja onegalikhi, i-rosemary ne-thyme
Unogwaja onegalikhi, i-rosemary ne-thyme, isidlo esilula esinokunambitheka okuningi. Ilungele wonke umndeni. Ehambisana namanye amafries aseFrance, kuhle.
Izaqathe Eziyosiwe Ngelamula
Izaqathe ezigosiwe kalamula zenza ukuhambisana okuphelele kuzo zombili izitsha zenyama nezinhlanzi. Zame! Uzobathanda.
Izimbambo ezinotamatisi, isidlo esenziwe ekhaya esinososo olula ongeke ukwazi ukumelana nokufaka isinkwa. Kusala ukuhambisana nakho nalokho okuthanda kakhulu.
Inkukhu kusoso enamakhowe
Inkukhu kusoso enamakhowe, isidlo esilula futhi esisheshayo ukulungiselela. Singayilungiselela kusengaphambili, ingaphinde ihambisane namazambane noma imifino ethosiwe.
Uphaya wamazambane nenyama
I-Potato nenyama yenyama, isidlo esiphelele kakhulu ukulungiselela isidlo njengesitsha esisodwa. Inothile kakhulu futhi ilula ukuyilungiselela.
Ithanga nojinja ukhilimu
Ithanga no-ukhilimu we-ginger, ukhilimu omuhle wokuhambisana nokubanda. Ngesidlo sakusihlwa esilula noma i-starter ilungile, icebile futhi abushelelezi.
Isamentshisi ekhethekile yethenda enopelepele neqanda
Iresiphi yesangweji elikhethekile le-tenderloin elinopelepele neqanda, isidlo esilula futhi esisheshayo okufanele usilungiselele. Uzoba nesidlo sakusihlwa esifanele wonke umndeni.
Amakhowe ka-Garlic nge ham
Amakhowe ka-Garlic ngeham, isidlo esilula futhi esilula. Isiqalo esihle noma ukuhambisana nesidlo senyama noma senhlanzi
Izimbambo ezibhakiwe ezibhakiwe
Izimbambo ezi-olini ezi-oveni, isidlo esilula futhi esisheshayo wonke umuntu azothanda, esihle ukulungiselela emicimbini noma emibuthanweni nabangani.
Ushizi risotto isidlo sendabuko se-gastronomy yase-Italiya, isidlo esilula futhi esisheshayo. Isiqalo ozoyithanda kakhulu.
IsiHalkey turkey ham
IGalician turkey ham, iresiphi elula futhi esheshayo yokulungisa, isidlo sendabuko esingasetshenziswa njengesiqalo noma njengesidakamizwa.
I-leek ne-apula ukhilimu
Ukhilimu we-leek ne-apula yisidlo esinempilo futhi esinothile, esilungele ukuqala noma isidlo sakusihlwa esilula. Kubushelelezi futhi kuyashesha ukulungiselela.
Inkukhu egcwele isoso
Inkukhu ifakwe isoso ngemifino, isidlo esilula futhi esihlukahluka kakhulu. Isitsha esiphelele esizothanda wonke umuntu, esilungele wonke umndeni.
IMacaroni enesoso sikashizi nanyanisi
IMacaroni enoshizi no-anyanisi isosi iresiphi elula futhi esheshayo yokulungisa. Ngezithako ezimbalwa sinesitsha esilula nesingabizi.
Hake usoso ngamaqanda ezigwaca
Faka i-sauce ngamaqanda ezigwaca, isosi elula yesitsha senhlanzi esihle kakhulu. Ilungele ukulungiselela amaphathi noma izinsuku ezikhethekile.
Isitshalo seqanda neYork ham cake
Ikhekhe lesitshalo seqanda neYork ham, isidlo esiphelele kakhulu nesicebile. Isitsha esilula esilungele izingane ukuba zidle imifino.
Amadombolo abhakiwe anepizza, okulunywa okumangazayo nokumnandi. Kulula ukuyilungisa, inempilo kakhulu futhi ilungele noma yisiphi isenzakalo
Isaladi lePipirrana, Isaladi yepipirrana ilula kakhulu ukuyilungisa, yinhle kakhulu futhi isha kakhulu. Izithako zalo eziyinhloko ngotamatisi, isaladi yePipirrana, isaladi elula futhi entsha. Okujwayelekile kweMurcia yize kunezinhlobonhlobo eziningi. Iresiphi enhle kakhulu.
I-pizza emfushane yoqweqwe
I-pizza esheshayo futhi elula ukulungiselela. Iyashuba futhi yenziwa ngokushesha okukhulu. Ilungele idina nabangane.
Inkukhu noshizi rolls
Inkukhu noshizi kugingqa indlela emnandi yokudla inkukhu. Eminye imiqulu egcwele ushizi o-creamy ozoba namanzi amaningi futhi agcwele ukunambitheka. Inkukhu noshizi kugingqa isitsha esilula ukulungiselela, esilungele izingane. Isitsha esingasilungiselela kusengaphambili.
Amaqanda agcwele isaladi
Amaqanda agxishwe isaladi, enye indlela yokudla isaladi kepha kube isidlo esiphelele, esinothile futhi esifanelekile ukulungiselela ukuqala noma ukudla kwakusihlwa. Amaqanda agxishwe isaladi, isidlo esilula nesisha sokulungisa njengesiqalo, isidlo esiphelele impela wonke umuntu azothanda.
Inkukhu iluma i-villaroy
Ngale iresiphi emnandi yenkukhu eluma i-la villaroy, uzomangaza izivakashi zakho ngesidlo esimnandi nje
I-lentil stew ne-chorizo
I-lentil stew ne-chorizo ​​isidlo esiphelele. Isitsha esilula futhi esisheshayo esingasilungiselela kusengaphambili, esilungele ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Ukholifulawa noma i-gratin ne-béchamel sauce
Ukholifulawa noma i-gratin enososo lwe-béchamel, isidlo esilula, esinempilo nesheshayo ukulungiselela. Isitsha sokulungiselela noma yisiphi isenzakalo.
Ama-burger amancane ane-anyanisi we-caramelized
Ama-burger amancane ane-anyanisi we-caramelized, acebile futhi kulula ukuwalungisa. Ilungele ukulungiselela isidlo esingakahleleki nomndeni noma nabangane.
I-Puff pastry enemifino eyosiwe, ushizi nama-anchovies
Namuhla silungiselela i-cuff pastry coca ngemifino eyosiwe, ushizi nama-anchovies, afana kakhulu ne- "coca de recapte" yakudala eyendabuko eCatalonia. Leli khekhe eliyimfucumfucu elinemifino eyosiwe, ushizi nama-anchovies iyi-coca efanele ukuzilungiselela ngokwethukela isidlo sakusihlwa nabangane noma njengesiqalo.
Isaladi ubhontshisi ngobisi imayonnaise
Lungisa lesi sithosi sesaladi esimnandi ngokuthinta okukhethekile, imayonnaise eyenziwe ngobisi esikhundleni seqanda. Uzomangaza izivakashi zakho
Ukubhaka amazambane ngopelepele
Kuleli sonto ngiphakamisa wena amazambane abhakiwe nopelepele, isidlo esimnandi futhi esilula wonke umuntu azothanda nakanjani. Okungcono kunamanye amazambane Ukubhaka amazambane ngopelepele, isidlo sangokwesiko esifanelekile njengokuhlobisa noma ukuhambisana nezitsha zenyama noma zenhlanzi.
Izinkukhu Zokwenza Inkukhu Ezizenzele
Ama-burger enkukhu azenzele wona, isidlo esihle ngempelasonto. Ukuzilungiselela ekhaya kulula kakhulu futhi kunempilo kakhulu. Singabalungiselela ama-burger enkukhu azenzele, ama-hamburger amnandi esidlweni sakusihlwa nabangane noma nomndeni. Okuhambisana nesaladi isidlo esikhulu.
Ilayisi Ngenkukhu Nemifino
Ilayisi nenkukhu nemifino yisidlo esimnandi esingasijabulela nganoma yisiphi isikhathi sonyaka futhi sisebenzise imifino esinayo efrijini. Njengelayisi elinenkukhu nemifino, isidlo esinokunambitheka okuningi, irayisi elilula ukulungiselela umndeni wonke. Izame !!!
Utamatisi ofakwe isaladi
Utamatisi ofakwe isaladi. Isaladi ingenye yezitsha zasehlobo ezijwayelekile, isidlo esingasenza sihluke kakhulu nokuthi singashiya utamatisi ofakwe isaladi, isidlo esikahle njengesiqalo sehlobo. Kulula ukuyilungisa futhi kuyisidlo esimibalabala.
Inkukhu fajitas, isidlo esijwayelekile sokudla kwendabuko kwaseMexico, amanye ama-rolls alula ukulungiselela okuhle kakhulu.
Ama-Meatballs ku-sauce enemifino
Ama-Meatballs ku-sauce enemifino isidlo sendabuko, ehambisana nemifino enza lokhu kudla okuyinhloko kube isidlo esiphelele kakhulu.
Utamatisi nophayinaphu ugayiwe
Utamatisi nophayinaphu ugayiwe engiwuphakamisayo namuhla ulula futhi uyaqabula, uphelele njengesidlwana, ukugcwaliswa